Ciidamada Koonfur Galbeed oo dagaal ku dilay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab - Awdinle Online
Ciidamada Koonfur Galbeed oo dagaal ku dilay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday Saldhig Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta Maamulka Koonfur Galbeed ku leeyihiin degmada Dinsoor ee gobolka Baay, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa waxaa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab, isla markaana khasaaro ay gaarsiiyeen.
Taliyaha Ciidamada Daraawiishta Maamulka Koonfur Galbeed ee degmada Diinsoor Shiine Mayow ayaa sheegay in dagaalkii ka dhacay Diinsoor ay al-Shabaab khasaaro ku gaarsiiyeen.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in Al-Shabaab ay ka dileen 7 xubnood sidoo kale ay ka furteen hub farabadan, kadib markii ay weerar ku qaadeen Xubnihii ka tirsan Al-Shabaab ee Ciidamada soo weeraray.
Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay ayaa waxaa dhowr jeer weerar ku qaaday Xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxana halkaasi ka dhacay dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Koonfur Galbeed & Al-shabaab, iyaga oo dagaalada guulo ka kala sheegta.
Previous articleWar Deg Deg ah: Farmaajo oo magacaabey 12 Safiir oo Cusub.
Next articleGolaha Wasiirada Soomaaliya oo dib u celiyay 12 Safiir oo la horgeeyay